Brax: Abuur, Kordhi, oo Cabbir Xayeysiiskaaga Dhaladka Hal Dashboard | Martech Zone
Brax: Abuur, Kor u qaad, oo cabir xayaysiimahaaga Dhaladka Hal Dashboard
Isniin, February 7, 2022 Isniin, February 7, 2022 Douglas Karr
Inta badan kakanaanta la shaqaynta shabakadaha Xayeysiiska Dhaladka ah ayaa ah dhibka ka jira ka shaqaynta guud ahaan shabakadaha xayeysiiska iyo agabkooda si loo cabbiro, la barbardhigo, loo abuuro, loo hagaajiyo, loona cabbiro xayaysiiskaaga hooyo.
Brax: Maamul xayaysiisyada Wadaniga ah Dhammaan hal meel
Brax waa madal xayaysiis wadani ah oo loogu talagalay maaraynta tirada badan, warbixin midaysan, iyo hagaajinta hadafka ku salaysan qaanuunka. Brax waxay sahlaysa isku dhafka ka kooban Yahoo Gemini, Outbrain, Taboola, Revcontent, Content.ad, iyo kuwa kale. Brax, waxaad awoodaa inaad ku cabirto waxqabadka ololaha kaqaybgalka jira, beddelka, iyo xogta iibka si aad miisaaniyada, u dalbto, oo aad u samayso hagaajinta daabacaha. Waxaad ku xidhi kartaa xisaabaadyo badan si aad u maamusho magacyo badan adigoo ku daraya isticmaaleyaal badan oo haysta ogolaanshaha gelitaanka.
Brax wuxuu awood kuu siinayaa:
Hal Dashboard, Dhammaan Xisaabaadkaaga - Ku xidh akoonno badan si aad u maamusho daraasiin magac, ololeyaal, iyo kanaalo, oo ay ku jiraan Outbrain, Taboola, Yahoo, Revcontent, iyo Content.ad. Kadibna is barbar dhig waxqabadka kanaalada oo dhan.
Dib-u-habaynta Miisaaniyadaha, Qandaraasyada, & Wax ka badan – Cusbooneysii dhammaan ololayaashaaga hal mar. Tifaftiraha Awooda Dhaladka ee Brax's wuxuu kuu oggolaanayaa inaad beddesho dhinac kasta oo ololahaaga ah (tafatiraha qaab-faafineed ee la yaqaan) si aad u dhaqso badan u furto oo u wanaajiso.
Si toos ah u wanaaji iyadoo ku saleysan waxqabadka - Deji dhowr xeer oo fudud, Brax-na wuxuu kuu wanaajin doonaa waxqabadkaaga xayeysiinta. Waxaad ku hagaajin kartaa KPI kasta, laga bilaabo "waqtiga goobta" ilaa "qiimaha ficil kasta" - taasoo la macno ah inay fududahay in la joojiyo xayeysiisyada ka-qaybgalka hooseeya, abaal-marinaha meelaynta wanaagsan, laga reebo meelaynta xun, iyo wax ka badan.
Tijaabi Ololayaasha iyo Shabakadaha Hal-abuurka Guud - A/B tijaabi kala duwanaanta hal-abuurka ee qayb kasta oo ka kooban ololaha iyo shabakadaha.
Samee go'aamo ku salaysan xog la raadin karo, la aamini karo – Macasalaame xogta wasakhda ah ee khaladka bini’aadmiga, iyo kharash gareynta warbaahinta oo ku salaysan male-awaal khaldan. Brax, waxaad ku qeexdaa summadaada raadraaca hal mar si aad u hesho xog sax ah, joogto ah weligeed. Isticmaal macros si aad si firfircoon ugu geliso magaca ololaha, aqoonsiga xayaysiiska, iyo aqoonsiga daabacaha.
Maamul gelitaanka kooxda iyo oggolaanshaha - Si aan kala sooc lahayn u maamul isticmaaleyaal badan iyo heerarka oggolaanshaha. Oggolow gelitaanka door ahaan, abaabul, ama olole Arag hawsha adeegsadaha si aad u aragto cidda waxa sameeyay goorma, oo ka saara gelitaanka adoon beddelin ereyada sirta ah.
Cabbir Xaqiiqda ROAS ee Xayeysiiskaaga Dhaladka ah - Brax waxay ku siinaysaa faham wanaagsan oo ku saabsan sida guud ahaan waddanku u shaqeeyo shirkaddaada. Ka soo deji oo ku dhex dara xogta nidaamyadaaga jira, oo ay ku jiraan Google Analytics - oo arag waxqabadka guud ahaan ololayaasha, waxa ku jira, iyo daabacayaasha wakhti kasta oo aad rabto.
Bilow 14-maalmood ee tijaabada Brax Free
Bixinta: Anigu waxaan ku xiran ahay Brax oo waxaan isticmaalayaa isku xirnaantooda ku xiran maqaalkan.
Tags: imtixaanka abku dhejinta xayeysiiskaadtechbraxnuxur.adxayeysiis hooyodashboard xayaysiis wadaniga ahmadal xayaysiis wadaniga ahroi advertising hooyoka baxsanku soo noqo xayeysiintaRevcontenttabuuYahoo Gemini
Waa maxay sababta adiga iyo macmiilkaagu ay tahay inaad u dhaqmaan sidii lamaane is qaba sanadka 2022